I-China i-Professional Medical Disposable zokhuseleko abavelisi kunye nabathengisi | EMVA
1.inokuphefumla, intsebenziswano, i-antistatic, anti-oyile,
2.Ngokuthintela igazi, ulwelo lomzimba kunye nokunye ukwaphuka.
Ukuthintela 3.Bidirectional wentsholongwane, iintsholongwane kunye nokudluliselwa kwamagciwane
4.OEM / ODM iyafumaneka
Igama lemveliso Inxibo yokulahla elahlwayo / yengubo yokhuseleko
Ubungakanani bemveliso M / L / XL / XXL, S / M / L / XL / XXL
Ukusetyenziswa Izixhobo zoKhuseleko kukhuseleko
Izixhobo iphepha + iphepha 73g
Uhlobo lweMveliso EN14126
Imvelaphi I-China (i-Mainland)
Umzekelo NO. Ukusebenza kwe-Coveralls yoKhuseleko iimpahla zokunxiba
Ulwenziwo I-OEM / i-ODM iyafumaneka
Inzalo Ngegesi ye-EO / ngemitha
Igama lebrand IINKCUKACHA
Isixhobo classifica iklasi 1
Ukukhusela uyilo impahla ekhuselayo
Uyilo lwe-1.Hooden: uyilo lwe-hooden yentloko, uyilo lwe-cap elastic, inokuthintela uthuli kunye neebheji;
Uyilo lwe-2.Zipper: Kulula ukunxiba nokukhupha kunye nokutywinwa okungcono;
Iikhofu ze-3.Elastic: I-Telescopic, isithintelo esisebenzayo sokusebenzisa ngokulula;
Uyilo lwesinqe esilahlayo: Uyilo lwesinqe se-Elastic, nxiba ngakumbi, ukuhlangabezana neemfuno zamanani ahlukeneyo.
Isinxibo sokhuselo sezonyango esilahlayo sinokuhambisa ngokuchaseneyo amagwebu omlomo emsebenzini nakwezinye iindawo ezingqongileyo. Iziphumo ezincinci ezibukhali zeetshipsi zetsimbi, amatye atyunyuziweyo, ukutshiza kwemichiza kunye nonyana.
Kutheni ukhethe ilaphu lethu lokukhusela:
1. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kwimveliso kunye nenkonzo yegawuni yokukhusela
2. Itekhnoloji ilungile kwaye ikhulile
3. Advanced imveliso umgca oluzenzekelayo
4. Iimpahla ezahlukeneyo zokhuselo ezinokuveliswa
5.Ulawulo olungqongqo lomgangatho wokuvala okhuselo
Egqithileyo Ikhithi yesampulu yentsholongwane ye-ORIENTMED
Okulandelayo: 3ply buso obulahlwayo bobuso bohlobo I, Uhlobo II, Uhlobo IIR